Onye Ndú Ọhụrụ na Ụmụ Nwaanyị Abụọ Katara Obi, Ya Bụ, Berak, Debora, na Jeel | Ihe E Ji A Kụziri Ụmụaka Baịbụl
Onye Ndú Ọhụrụ na Ụmụ Nwaanyị Abụọ Katara Obi
Mgbe Jọshụa duru ndị Izrel ruo ọtụtụ afọ, ọ nwụrụ mgbe ọ dị otu narị afọ na iri. N’oge Jọshụa nọ ndụ, ndị Izrel na-efe Jehova. Ma mgbe ọ nwụrụ, ha bidoro ikpere arụsị otú ahụ ndị Kenan na-eme. Jehova kwere ka eze ndị Kenan aha ya bụ Jebin taa ndị Izrel ahụhụ maka na ha kwụsịrị irubere Jehova isi. Ha rịọrọ Jehova ka o nyere ha aka. Ọ bụ ya mere Jehova ji nye ha onye ndú ọhụrụ aha ya bụ Berak. Ọ ga-enyere ha aka ịlọghachikwute Jehova.
Debora, onye amụma nwaanyị, ziri Berak ozi ka ọ bịa. E nwere ozi Jehova ziri ya ka o zie ya. Jehova ziri Berak, sị: ‘Kpọrọ puku ndị ikom iri gaa lụso ndị agha Jebin agha n’iyi Kaịshọn. Ị ga-emeri Sisera, onyeisi ndị agha Jebin, n’ebe ahụ.’ Berak gwara Debora, sị: ‘M ga-aga ma ọ bụrụ na ị ga-eso m aga.’ Debora sịrị ya: ‘M ga-eso gị aga. Ma mara na ọ bụghị gị ga-egbu Sisera. Jehova kwuru na ọ bụ nwaanyị ga-egbu ya.’
Debora so Berak na ndị agha ya gbagoo n’Ugwu Tebọ ka ha kwadebe maka agha. Ozugbo Sisera nụrụ ihe a, ọ kpọkọtara ụgbọ ịnyịnya agha ya na ndị agha ya gaa n’iyi ndagwurugwu Kaịshọn. Debora gwara Berak, sị: ‘Taa ka Jehova ga-eme ka i merie.’ Berak na puku ndị ikom iri gbadatara n’ugwu ka ha lụso ndị agha Sisera siri ezigbo ike agha.
Jehova mere ka iyi Kaịshọn tojuo. Ụgbọ ịnyịnya agha Sisera tọrọ n’apịtị. Sisera hapụrụ ụgbọ ịnyịnya ya gbaa ọsọ. Berak na ndị agha ya meriri ndị agha Sisera, Sisera agbaa ọsọ. Ọ gara zoo n’ụlọikwuu nke otu nwaanyị aha ya bụ Jeel. Jeel nyere ya mmiri ara ehi ka ọ ṅụọ ma were ákwà e ji achụ oyi kpuchie ya. Ụra buuru dike a n’ihi na ike gwụchara ya. Jeel jizi nwayọọ gbere igbere were ntú kpọgide ya n’isi, ya anwụọ.
Berak bịara na-achọ Sisera. Jeel si n’ụlọikwuu ya pụta, sị ya: ‘Bata. M ga-egosi gị nwoke ahụ ị na-achọ.’ Berak banyere n’ụlọikwuu ahụ ma hụ ozu Sisera. Berak na Debora bụrụ abụ ha ji kelee Jehova maka na o mere ka ndị Izrel merie ndị iro ha. Ndị Izrel biri n’udo ruo afọ iri anọ.
“Ndị inyom na-ezisa ozi ọma bụ ìgwè dị ukwuu.”—Abụ Ọma 68:11
Ajụjụ: Olee otú Debora si nyere ndị Izrel aka? Gịnị ka Jeel mere iji gosi na ya katara obi?
Ndị Ikpe 4:1–5:31
Gịnị ka ihe Baịbụl kọrọ gbasara Debora na-akụziri anyị gbasara inwe okwukwe na obi ike?